Njikọ ndị nrụpụta - China Njikọ orylọ ọrụ & Ndị na-eweta ya
✭ Njikọ bụ onye nnọchite anya ma ọ bụ ihe mkpuchi gburugburu API nke na-enye ohere ka ọrụ a na-akparịta ụka Microsoft Power Automate, Microsoft Power Apps, na Azure Logic Apps. Ọ na - enye ndị ọrụ ohere ijikọ akụkọ ha ma kwado usoro omume ewubere tupu ha ewulite ngwa ha na arụmọrụ ha.
✭ The plastic akụkụ nkenke dị nnọọ elu, na kenha ọnọdụ kwesịrị ka a n'ime ndidi nke 0.01-0.02mm. Ihe ya bu LCP ihe oku V0.
✭ Ngwaahịa a ga-emepụta site na igwe na-agbazi ọgwụ na-agba ọsọ ọsọ ọsọ, yana usoro nkedo dị mkpụmkpụ na oke ngwaahịa ziri ezi. A ghaghị ịchịkwa usoro ogwu ahụ n'ime sekọnd 15-25 iji hụ na ụdị ngwaahịa ọ bụla ga-agbanwe.
✭ Ihe ndị a chọrọ maka ebu ahụ dịkwa oke elu, ọ dịkwa mkpa ka e mee ọnọdụ nke ọdụ ụgbọ mmiri njikọ ngwaahịa dị iche iche, ma na ndidi nke ntinye ọ bụla ga-emerịrị n'ime ohere nke 0.005mm.
Obere nkenke servo sterịn gia mkpuchi
✭Site na mgbasawanye na-aga n'ihu nke ahịa robot, ọtụtụ ụlọ ọrụ na-arụpụta robot amalitela asọmpi siri ike. Ndụ ndụ nke robot, ibelata mkpọtụ abụrụla nnukwu nsogbu ọrụ aka. Akụkụ a nke obere servo servo na-arụ ọrụ dị oke mkpa, n'ihi na nkwonkwo ọ bụla nke robot chọrọ servo iji nweta ọrụ dị iche iche.
✭Akụkụ plastik anyị bụ akụkụ nke ụlọ nke servo steering gear, na ihe plastik ejiri mee ihe PA66 + 30GF dị elu. N'okpuru ọrụ nke gia nke servo steering gear, ọ nwere ike hụ na shea plastik agaghị emebi ma kwụsie ike n'oge mmegharị nke gia. Akpụkpọ a plastik nwere nnukwu ihe achọrọ maka izi ezi nke ebu ahụ, ọkachasị nhapu nke oghere oghere, iji hụ na ọ dị n'ime ogo nke 0.005mm. A na-arụpụta ihe eji akpụzi anyị site na iji ihe ndị si na Becu na S136.
✭Akpịrịkpa plastik a nwere mkpokoro rọba atọ, mkpokoro n’elu, nke etiti na etiti ya. Ha ga-adaba n'ụzọ zuru oke iji hụ na ọnọdụ etiti oghere gia na-agbanwe agbanwe. Ya mere, maka ụdị nkenke nkedo plastik, oghere ebu bụ naanị 2, nke mere na enwere ike ịchịkwa nha ahụ nke ọma.